ကွန်ပျူတာပန်းထိုး - ဘာလဲ ဘယ်လိုလုပ်ရ? ဒါဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲ? ဘယ်လိုခန့်မှန်းရမလဲ။
ကွန်ပျူတာပန်းထိုး - ဘာလဲ
ကွန်ပြူတာပန်း အဝတ်အစားကိုအလှဆင်သည့်ဂန္ထဝင်နှင့်အမြင့်မြတ်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကမ္ဘာသစ်ကိုအစားထိုးထားသောကမ္ပည်းစာ၊ သင်္ကေတသို့မဟုတ်ယန္တရားကိုချည်နှောင်ခြင်းနှင့်ယနေ့လက်မှုပစ္စည်းနေရာအစားထိုးထားသောကွန်ပျူတာဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားသောစက်ကိုအသုံးပြုသည်။
ကျနော်တို့စာသားဘာမှနီးပါးဘာမှပန်းထိုးနိုင်ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာပန်းထိုးအထည်အလိပ်အမျိုးမျိုးတွင်အောင်မြင်စွာအသုံးပြုပြီးထူးခြားသောကော်ပိုရိတ်အ ၀ တ်အစားများကိုပြုလုပ်သည်။ ကုမ္ပဏီ ၀ န်ထမ်းများ ၀ တ်ဆင်သော ၀ တ်စားဆင်ယင်မှုသည်၎င်း၏အမှတ်အသား၊ ၀ န်ထမ်းအားလုံးသည်ယူနီဖောင်းဝတ်စုံရှိဘောလုံးသမားများကဲ့သို့အသင်းတစ်ဖွဲ့တည်းတွင်ကစားသည်။
ကွန်ပြူတာပန်းထိုးခြင်းကို gadget များနှင့်ကြော်ငြာအဝတ်များဖန်တီးရာတွင်အောင်မြင်စွာအသုံးပြုနိုင်သည်။ ပန်းထိုးတံဆိပ်နှင့်ကုမ္ပဏီအမည် တီရှပ်များနှင့်ချွေးထွက်အင်္ကျီများသည်သုံးစွဲသူများအတွက်လက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်းမြှင့်တင်ရေးအဝတ်အစားများဝတ်ဆင်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုမြှင့်တင်ရန်ဖြစ်သည်။
သို့သော်ကွန်ပျူတာပန်းထိုးခြင်းကိုအဝတ်အစားတွင်သာအသုံးပြုသည်မဟုတ်။ ကွန်ပြူတာဖြင့်လည်းသင်ပန်းထိုးနိုင်သည် ဦးထုပ်များ, အိတ်များ, လက်သုတ်ပုဝါ, အဝတ်လျှော်နှင့် အလုပ်ခွင်.
ပန်းထိုးထားသောအမှတ်တံဆိပ်များနှင့်ကမ္ပည်းစာများသည်ပုံမှန်တံဆိပ်တုံးကဲ့သို့အ ၀ တ်အစားတွင်ကပ်ထားသောအလွယ်တကူဖြုတ်တပ်နိုင်သောနှင့် peelable လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များထက် ပို၍ တာရှည်ခံသည်။
ကွန်ပျူတာပန်းထိုး - ကြော်ငြာအဝတ်အစားများပေါ်တွင်ပုံနှိပ်ခြင်းသမိုင်း
ပန်း သူတို့ကမကြာခဏယဉ်ကျေးမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနှင့်ပေးထားသောဒေသနှင့်နိုင်ငံ၏သင်္ကေတဖြစ်ကြသည်။ ရိုးရာဝတ်စုံများနှင့် ခွဲ၍ မရသောဒြပ်ထုဖြစ်သောကျော်ကြားသောကူရှူဘီယန်သို့မဟုတ်ကုန်းမြင့်ပန်းထိုးပွဲကိုမှတ်မိရန်လုံလောက်သည်။
ဤနည်းအားဖြင့်လူစုလူဝေးထဲမှထင်ရှားပေါ်လွင်စေရန်အပြင်လူများအဖွဲ့များကိုဖော်ထုတ်နိုင်ရန်အတွက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့် PR ကျွမ်းကျင်သူများကလျင်မြန်စွာအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ သင့်တော်သောရွေးချယ်ထားသည့် ၀ တ်စုံကို ၀ တ်ထားသည့် ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး ကို ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူကမတူကွဲပြားစွာဆက်ဆံသည်။ ဥပမာအားဖြင့်လေယာဉ်မှူးများ၊ ရဲများနှင့်စစ်သားများသည်သူတို့၏ကြော့ရှင်းသောယူနီဖောင်းများကိုလေးစားကြသကဲ့သို့ပင်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများမှ ၀ န်ထမ်းများသည်ယူနီဖောင်းနှင့်ထူးခြားသောဝတ်စုံများနှင့်လုံးဝကွဲပြားခြားနားကြသည်။ အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ၊ များစွာသောကုမ္ပဏီများသည်ထူးခြားသောယူနီဖောင်းများကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့ရဲ့ ၀ န်ထမ်းတွေဟာအသင်းတစ်ခုတည်းလိုပဲခံစားနိုင်ပြီးအတူတူအတူတူကစားကြတာပါ။
ပန်းထိုးခြင်းဆိုသည်မှာ gadget နှင့်ကြော်ငြာအဝတ်အစားများဖြစ်သည်။ လူတိုင်းသည်လက်ဆောင်များ၊ အကယ်၍ သူသည်ကုမ္ပဏီ၏အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်ပါသည့်အိတ်တစ်လုံး၊ ဦး ထုပ်တစ်ခုသို့မဟုတ်တီရှပ်တစ်ခုကိုရရှိပါက၎င်းကို ၀ တ်ဆင်ရမည်၊
စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း ပန်းများအတွက်ဝယ်လိုအားနှစ်စဉ်ကြီးထွားစေခဲ့သည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, ကွန်ပျူတာနည်းပညာ၏တိုးတက်မှုအခွင့်အလမ်းများ၏အဆကြီးထွားဖို့အထောက်အကူပြုခဲ့သည်။ လက်ရှိတွင်အဝတ်အစားနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးပေါ်တွင်ကျောက်စာများနှင့်ပုံစံများကိုပန်းထိုးခြင်းသည်လျင်မြန်၊ တိကျမှု၊ တိကျမှု၊ ယနေ့ထောင်နှင့်ချီသောပန်းထိုးခြင်းကိုမည်သည့်ပြproblemsနာမျှမရှိဘဲအကြီးမားဆုံးမျှော်လင့်ချက်များနှင့်ပြည့်မီရန်အချိန်တိုအတွင်းလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
ကွန်ပြူတာပန်းထိုးခြင်း - အဝတ်အထည်များတွင်အက္ခရာများကိုဆေးထိုးခြင်းနည်းပညာ
ခေတ်မီစက်များတွင်အမျိုးမျိုးသောအရောင်အမျိုးမျိုးသောအပ်များနှင့်ချည်များစွာတပ်ဆင်ထားသည်။ အပ်ချုပ်သည့်လုပ်ငန်းကိုကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြင့်စီမံသည်။ တင်ထားသောဒီဇိုင်းကို အခြေခံ၍ စက်သည်သင့်တော်သောအက္ခရာများနှင့်ပုံစံများကိုချုပ်ပေးသည်။
သင်ပန်းထိုးလိုသည့်နေရာ၏မည်သည့်နေရာနှင့်နေရာကိုဆုံးဖြတ်ရန်လုံလောက်သည်။ ထို့အပြင်၎င်း၏ဒီဇိုင်းနှင့်အရွယ်အစားကိုရွေးချယ်ရန်လိုအပ်သည်။ များသောအားဖြင့်သင့်တော်သော typeface နှင့်ကုမ္ပဏီများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ၏အမှတ်တံဆိပ်ပါသည့်ကျောက်စာများကိုပုံနှိပ်ကြသည်။ ပုံစံကိုအမှာစာဖြင့်ပေးပို့သင့်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အထူးကုများသည်၎င်းသည်ကွန်ပျူတာအပ်ချုပ်စက်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ကူညီလိမ့်မည်။
အသွင်အပြင်သည်ပန်းထိုးသည့်အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်ပါသောအဝတ်အစားများကိုထင်ရှားစေသည်။ ဂရုတစိုက်လုပ်သောပန်းများသည်အရည်အသွေးအသစ်များကိုရရှိစေသည်။ ဒါဟာထိတွေ့ခံစားရတယ်ရိုးရှင်းစွာစတိုင်။ ကွန်ပျူတာပန်းထိုးအဝတ်အထည်နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများစတိုင်နှင့်ကြော့ရှင်းမှုပေးသည်။ ၎င်းမှကြော်ငြာသောအမှတ်တံဆိပ်သည်ဂုဏ်သိက္ခာတက်သည်။ တီရှပ်နှစ်လုံးကိုစိတ်ကူးကြည့်ပါ၊ ဂရုတစိုက်ချည်နှောင်ထားသောကုမ္ပဏီတံဆိပ်ပါသည့်တစ်ခုနှင့်နောက်တစ်ခုမှာကြော်ငြာနံပါတ်ပါသောကြော်ငြာနံပါတ်ပါရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့သောပုံရိပ်သည်ပလပ်စတစ်နှင့်စျေးပေါသောနေ့စွဲဘေးတွင်ကြော့။ ကြော့ရှင်းသည့်မာစီဒီး၏ဆက်စပ်မှုကိုသတိရစေသည်။
အကျိုးဆက်အားဖြင့်ကွန်ပျူတာပန်း၏ကြာရှည်ခံခြင်းသည်၎င်း၏ပြိုင်ဘက်များထက်နှိုင်းယှဉ်။ သာလွန်သည်။ ပန်းထိုးခြင်းကအလှဆင်သည့်အရာနှင့်အတူတူပင်အကြမ်းခံသည်။ အထိမ်းအမှတ်သို့မဟုတ်ကမ္ပည်းစာသည်အဝတ်လျှော်ခြင်း၊ ကွန်ပျူတာပန်းထိုးခြင်းသည်အ ၀ တ်အထည်၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီးအလွယ်တကူဖြုတ်တပ်နိုင်သောအမြဲတမ်းမဟုတ်သည့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းသာမကသူ၏အသွင်အပြင်သည်လျင်မြန်စွာယုတ်ညံ့ပျက်စီးသွားသည်။
ကွန်ပျူတာပန်းထိုးခြင်းသည်မည်သည့်အရောင်မျိုးမဆိုရှိနိုင်သည်။ တစ်ခုတည်းသောကန့်သတ်ချက်သည်အသုံးပြုသောချည်၏အရောင်ဖြစ်သည်။ ကွန်ပျူတာထိန်းချုပ်မှုကြောင့်ပန်းထိုးခြင်းကိုခွဲစိတ်ကုသမှုဆိုင်ရာတိကျမှုနှင့်ပြုလုပ်သည်။
ပန်းထိုးခြင်းကိုအထူးပြုလုပ်နိုင်သည်။ ကွန်ပျူတာနည်းပညာသည်တိကျသော၊ ထပ်ခါတလဲလဲနှင့်မြင့်မားသော resolution ရှိသည့်ပုံစံများ၊ သင်္ကေတများနှင့်ကျောက်စာများကိုရေးဆွဲနိုင်သည်။
ပမာဏများပြားစွာဖြင့်ပန်းထိုးခြင်းသည်စီးပွားရေးအရအကျိုးအမြတ်ရစေသည်။ ၎င်း၏စျေးနှုန်းမှာအတော်လေးနိမ့်သည်။ အဝတ်အစားအမျိုးမျိုး၊ ရှပ်အင်္ကျီများ၊ တီရှပ်များ၊ ပိုလိုများ၊ ဘောင်းဘီများ၊ ဘောင်းဘီတိုများအပြင်မျက်နှာသုတ်ပုဝါများ၊
သာမန်မျက်နှာပြင်အပြည့်ကွန်ပျူတာပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ဆန့်ကျင်။ အကန့်အသတ်မဲ့အရောင်ခြယ်ထားသောပုံရိပ်တစ်ခုလုံးကိုပန်းထိုးရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ သို့သော်ဤသည်အားလုံးအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး။ ပန်းထိုးထုံးတမ်းစဉ်လာကိုရည်ညွှန်းသည်၊ မြင့်မြတ်သောလူ့အဖွဲ့အစည်း၏အဝတ်အစားများကိုအလှဆင်သည့်လက်မောင်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာ kitschy, ရောင်စုံနှင့်ဒိန်ခဲပန်းချီကားများနှင့်မပတ်သက်။
ကွန်ပျူတာပန်းထိုးခြင်း - လူကြိုက်များသောထုတ်ကုန်များနှင့်ကြော်ငြာအဝတ်အစားများ
ပန်းနှင့်အတူပထမ ဦး ဆုံးအသင်းအဖွဲ့? ရင်ဘတ်တွင်ကော်လာနှင့်လှပသောပန်းထိုးတံဆိပ်ပါသောတီရှပ်။ ကြော့ရှင်းနှင့်ဝတ်ဆင်နှစ်သိမ့်များ၏ပေါင်းစပ်။ လူတွေကိုသင့်ကုမ္ပဏီ (သို့) အဖွဲ့အစည်းရဲ့အမှတ်တံဆိပ်နဲ့ ၀ တ်ဆင်နိုင်အောင်ပျော်ရွှင်စေပါ။
နေ့တိုင်းဝတ်ဆင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။ သင်၏ ၀ န်ထမ်းများသို့မဟုတ်ဖောက်သည်များသည်သင်၏တံဆိပ်သို့မဟုတ်သင့်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုရန်အားပေးသည့်ကမ္ပည်းစာတိုတိုအင်္ကျီလက်တိုဝတ်သည့်သင်၏အမှတ်တံဆိပ်ကိုကြော်ငြာပါစေ။
တစ် ဦး ကဂန္ hoodie လည်းသင်၏ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်အမှတ်တံဆိပ်ကိုကြော်ငြာနိုင်ပါတယ်။ ချွေးထွက်ရှပ်အင်္ကျီပေါ်မှသင်၏စကားဝှက်၊ နာမည်နှင့် / သို့မဟုတ်လိုဂိုကိုထိုးပါ။
သင်၏ ၀ န်ထမ်းများအားနွေးထွေးစေပြီးတစ်ချိန်တည်းတွင်ကုမ္ပဏီကိုသူတို့၏အဝတ်အစားများနှင့် ပါတ်သက်၍ အမြင်သဘောထားဖော်ထုတ်လိုပါသလား။ သို့မဟုတ်သင့်ကုမ္ပဏီအတွက်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးမြှင့်တင်ရေးအဝတ်အစားများကိုသင်ဖန်တီးချင်လား။ ကွန်ပြူတာထိုးသည့်သိုးသည်ရွေးချယ်စရာအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ပိုပြီးတရားဝင်နှင့်ကြော့? သင်၏ ၀ န်ထမ်းများသည်ဖောက်သည်များအား ၀ တ်ဆင်သောကုမ္ပဏီတံဆိပ်ပါသော ၀ တ်စုံဖြင့် ၀ တ်ဆင်စေခြင်း။ ရှပ်အင်္ကျီများပေါ်တွင်ကွန်ပျူတာပန်းကိုရွေးချယ်ပါ။
သင်အကြိုက်ဆုံးအသင်း၏အမှတ်တံဆိပ်၊ ဘွဲ့ရသည့်တက္ကသိုလ်သို့မဟုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏အမှတ်တံဆိပ်မပါဘဲဘေ့စ်ဘော ဦး ထုပ်များကိုမြင်ယောင်ရန်ခက်ခဲသည်။ သင်၏အဖွဲ့အစည်းသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီ၏တံဆိပ်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ရှုပါ။ ထုပ်ပေါ်မှာသူတို့ကိုထု။
ဟိုတယ်နှင့် SPA ကိုတံဆိပ်ကပ်ထားသောလက်သုတ်ပုဝါများ၊ အမှတ်တမဲ့၊ ပျင်းစရာကောင်းသည့်လက်သုတ်ပုဝါများကိုသင့်အမှတ်တံဆိပ်၏ဇိမ်ခံမှုကိုအလေးပေးသောထူးခြားသည့်အရာတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲပါ။ ၎င်းသည်သင့်အတွက်ဂုဏ်သိက္ခာသာမကသင့် guests ည့်သည်များအတွက်ဇိမ်ခံမှုလည်းဖြစ်သည်။
အိတ်တစ်လုံးအားကုမ္ပဏီနာမည်နှင့်လိုဂိုနှင့်အလွယ်တကူမှတ်သားနိုင်ပုံ။ ကွန်ပြူတာထိုးတာကောင်းတယ်။ ဈေးပေါပြီးမြန်ဆန်သောသာမန်အိတ်တစ်လုံးသည်သင်၏ကုမ္ပဏီ၏ထူးခြားသောလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်လာသည်။
အလုပ်အဝတ်အစားသည်ကွန်ပျူတာပန်းထိုးရန်အတွက်သယ်ဆောင်သူအဖြစ်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်။ နာမည်၊ ရာထူး၊ ကုမ္ပဏီအမည်နှင့်လိုဂို - ဝတ်စုံကိုသို့မဟုတ်အခြားအဝတ်အစားများနှင့်မြင်နိုင်မှုမြင့်မားသောအထူးပြုဒြပ်စင်ပေါ်တွင်ပန်းထိုးခြင်း။
ကွန်ပျူတာပန်းထိုး - ဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲ။
ကြီးမားသောအမှာစာများအတွက်ကွန်ပြူတာပန်းထိုးခြင်းတစ် ဦး ချင်းစီသည်စျေးသက်သာလိမ့်မည်။ စျေးနှုန်းမှာပန်းထိုးသည့်sizeရိယာ၏အရွယ်အစား၊ ပန်းကိုယ်နှိုက်အမျိုးအစား၊ မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိပုံစံ၏သိပ်သည်းဆ၊ စင်တီမီတာတွင်ဆေးထိုးအပ်အရေအတွက်တို့ကြောင့်လည်းလွှမ်းမိုးသည်။2 ပစ္စည်း၊ အပြင်ပန်း၌ပန်းထိုးသင့်သည့်နေရာအရေအတွက်။
လူတစ် ဦး ချင်းစီ၏တန်ဖိုးများကိုခန့်မှန်းရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ သင်ပန်းထိုးလိုသောဂရပ်ဖစ်များနှင့်လုပ်မည့်အရေအတွက်နှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုကျွန်ုပ်တို့ထံပို့ပေးပါ။
5 /5( 53 မဲ )
ကွန်ပျူတာပန်းဆိုတာဘာလဲကွန်ပျူတာပန်းဆိုတာဘာလဲကွန်ပျူတာပန်းထိုးဖို့ဘယ်မှာလဲကွန်ပျူတာပန်းကွန်ပျူတာပန်းထိုးBiałystokBielsko ကွန်ပျူတာပန်းကွန်ပျူတာပန်းထိုးခြင်း bydgoszczကွန်ပျူတာပန်းစျေးနှုန်းကွန်ပျူတာပန်းစျေးနှုန်းစာရင်းကွန်ပျူတာပန်းကဘာလဲကွန်ပျူတာပန်းကဘာလဲCzęstochowa၏ကွန်ပျူတာကွန်ပျူတာကွန်ပျူတာပန်းgdańskကွန်ပျူတာပန်းထိုး Gdyniaကွန်ပျူတာပန်း gliwiceကွန်ပျူတာပန်း Gnieznoဘယ်လောက်ကုန်ကျမလဲကွန်ပျူတာပန်းထိုးကွန်ပျူတာပန်းထိုးသလိုပဲဘယ်လိုစလုပ်ရမလဲကွန်ပျူတာပန်းထိုးဘယ်လိုကွန်ပျူတာလုပ်ဖို့ပန်းကွန်ပျူတာပန်းဘယ်စက်ကွန်ပြူတာပန်းထိုးခြင်း pkdကွန်ပျူတာပန်း Kaliszကွန်ပျူတာပန်း katowicekielce အတွက်ကွန်ပျူတာကွန်ပျူတာကွန်ပျူတာပန်း KoninKoszalin အတွက်ကွန်ပျူတာပန်းကွန်ပျူတာထုတ် Krakowကွန်ပျူတာလှေပန်းကွန်ပျူတာပန်းလှေစျေးနှုန်းစာရင်းကွန်ပျူတာအပ် Lublinတီရှပ်များပေါ်တွင်ကွန်ပျူတာပန်းကွန်ပျူတာပန်းပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများကွန်ပျူတာပန်းထိုး Nowy Sączကွန်ပျူတာပန်း olsztynOpole ရှိကွန်ပျူတာပန်းထိုးခြင်းကွန်ပျူတာပန်း pabianiceကွန်ပျူတာပန်းpoznańကွန်ပျူတာထိုး radomRybnik ၏ကွန်ပျူတာပန်းReichs ၏ကွန်ပျူတာကွန်ပျူတာကွန်ပျူတာပန်း Silesiaကွန်ပျူတာပန်းSłupskSosnowiec အတွက်ကွန်ပျူတာကွန်ပျူတာကွန်ပျူတာပန်းswarzędzbristles ၏ကွန်ပျူတာကွန်ပျူတာကွန်ပျူတာပန်းချုပ်Tarnówအတွက်ကွန်ပျူတာပန်းToruńအတွက်ကွန်ပျူတာကွန်ပျူတာကွန်ပျူတာပန်းဝါဆောကွန်ပျူတာပန်းထိုးဝါဆောစျေးနှုန်းကွန်ပျူတာပန်းထိုးwrocławကွန်ပျူတာပန်းပုံစံများကွန်ပျူတာပန်းရောင်စိမ်းလန်းသောတောင်ကွန်ပျူတာပန်းဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲကွန်ပျူတာပန်းလုပ်နည်းကွန်ပျူတာပန်းကိုဘယ်လိုစျေးနှုန်းသတ်မှတ်ရမလဲကွန်ပျူတာပန်းထိုးပုံကွန်ပျူတာပန်းထိုးနည်းကွန်ပျူတာပန်းထိုးနည်းကွန်ပျူတာပန်းထိုးနည်းကွန်ပျူတာပန်းထိုးနည်းတီရှပ်များထုတ်အဝတ်အထည်ကြော်ငြာအပ်ချုပ်
ဒီဇိုင်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော်မှု: Pixels ပြီးပြည့်စုံသော